Thwebula 360 Total Security 10.0.0.1137 – Vessoft
Thwebula 360 Total Security
Ikhasi elisemthethweni: 360 Total Security
I-Wikipedia: 360 Total Security
360 Ingqikithi Security – an isofthiwe unqulo wesi arab kuphela ukuvikela ikhompyutha ezinsongweni online futhi isofthiwe enonya. 360 Inani Security isebenzisa enamandla unqulo wesi arab izinjini ukunikeza olunzulu ukuvikelwa uhlelo ngesikhathi sangempela. Isofthiwe isekela ezahlukene ukuskena izindlela zesimiso ezindaweni ezithile nezindawo abasengozini iningi hard drive. Futhi isofthiwe iqukethe i section olwengeziwe nge iqoqo amathuluzi ezikhethekile ukuhlanza nokwandisa uhlelo. Inani Security 360 kwenza ukusebenza amafayela nokusola software sihlukanisiwe nezinye inkonzo uhlelo usebenzisa esakhelwe Sandbox imvelo virtual. Isofthiwe inikeza ezingeni lelisetulu ukuvikelwa ngenkathi izingilazi eziningi okungenani uhlelo imithombo.
Izinga High isivikelo uhlelo
Ukusetshenziswa enamandla unqulo wesi arab izinjini
Different ukuskena izindlela
Cleaning kanye nokwenza of the system
Isekela Sandbox imvelo ephephile
Amazwana ku 360 Total Security
360 Total Security software ehlobene
Isofthiwe unqulo wesi arab ukuthola futhi ususe amafayela ayingozi. Isofthiwe isebenzisa izinjini ahlukahlukene unqulo wesi arab ukuvikela izindawo ezahlukene uhlelo.
Omunye wabakhiqizi abahamba phambili besofthiwe ye-antivirus. Isofthiwe isebenzisa izixazululo zakamuva zakamuva emkhakheni wokuvikelwa kuma-virus ahlukahlukene kanye nezinsongo zenethiwekhi.
Le antivirus ineklayenti eyakhelwe ngaphakathi kwe-VPN kanye nezinga elihle kakhulu lokuvikelwa kwekhompiyutha ngokumelene ne-malware, futhi ithola ngokuphumelelayo ubugebengu obuyingozi.
Antivirus, Ukuhlanza nokuthuthukisa
Umhleli graphic inhlanganisela yezimpawu letinengi functionalities. Isofthiwe isekela umsebenzi ngamaphrojekthi elula noma ziyinkimbinkimbi futhi kwenza ukuba uwagcine takhiwo ehlukahlukene.
Isofthiwe ukuvumelanisa idatha usayizi ezahlukene kanye format ne isitoreji ifu Mega. Isofthiwe encrypts thembeke amafayela phakathi yokudlulisela.
Ifoni, Abadlali beMediya
Lesi yisisombululo esihle kakhulu sokuhlela nokudlala amafayela abezindaba kukhompyutheni yakho, futhi udlulise amafayili emidiya phakathi kwamadivayisi we-computer ne-Sony.